GADZIRISA NVIDIA CONTROL PANEL ISINGAVHURE - NYORO
Gadzirisa NVIDIA Control Panel Isingavhure
Gadzirisa NVIDIA Kudzora Paneli Isingavhure: Kana PC yako iine NVIDIA graphic kadhi yakaiswa ipapo iwe unenge uchinyatso kuziva nezveNVIDIA Control Panel iyo inoita kuti iwe uchinje marongero senge 3D marongero kana PhysX kumisikidzwa etc. Asi chii chinoitika kana iwe usingakwanise kuvhura NVIDIA control panel zvakanaka iyi posvo iri kugadzirisa iyi chaiyo nyaya iyo NVIDIA control panel isinga vhure. Nyaya hombe ndeye Graphic Kadhi madhiraivha ayo anogona kunge akaora kana echinyakare nekuda kwekuti iyo NVIDIA control panel isingavhure.
Iyo yekugadzirisa iri nyore iwe unofanirwa kuti udzorezve manenji makadhi emifananidzo asi usanyatso kuva nechokwadi chekuti izvi zvichagadzirisa nyaya. Sevashandisi vakasiyana vane akasiyana PC kumisikidza saka ungangoda kuyedza nzira dzakasiyana kuti ugadzirise nyaya. Saka pasina kutambisa nguva tione kuti tinganyatso gadzirisa sei NVIDIA Control Panel Kwete Kuvhura kana Kusashanda nyaya nerubatsiro rwepazasi-yakanyorwa yekugadzirisa gwara.
Maitiro 1: Gadziridza NVIDIA Graphics Kadhi Mutyairi
Maitiro 2: Ita shuwa kuti NVIDIA Ratidza Mutyairi Service iri kushanda
Maitiro 3: Bvisa NVIDIA Graphics Kadhi Mutyairi
Maitiro 4: Shandisa Ratidza Mutyairi Uninstaller
Maitiro 5: Gadziridza .NET Sisitimu uye VC ++ Inogovaniswa
Maitiro 6: Gadza Yakakwirira Sarudzo
Maitiro 7: Registry Gadzirisa
1.Dzvanya Windows Key + R wobva wonyora devmgmt.msc (pasina makotesheni) uye rova ​​pinda kuti uvhure Maneja wedhijitari.
2.Next, wedzera Ratidza adapters uye kurudyi-tinya pane yako Nvidia Graphic Kadhi uye sarudza Gonesa.
3.Kana iwe waita izvi zvakare kurudyi-kurudyi pane yako graphic kadhi uye sarudza Gadziridza Mutyairi Software.
4. Sarudza Tsvaga otomatiki kune yakagadziridzwa mutyairi software uye rega ipedze maitiro.
5.Kana iyo danho riri pamusoro rakakwanisa kugadzirisa dambudziko rako saka rakanaka kwazvo, kana zvisiri zvadaro enderera.
6.Zve sarudza Gadziridza Mutyairi Software asi panguva ino pachiratidziri chinotevera sarudza Bhurawuza komputa yangu kune mutyairi software.
7. Zvino sarudza Rega nditore kubva pane runyorwa rwevatyairi vemidziyo pakombuta yangu .
8. Pakupedzisira, sarudza mutyairi anoenderana kubva pane runyorwa rweako Nvidia Graphic Kadhi uye tinya Inotevera.
9.Rega maitiro ari pamusoro apedze uye wotangazve PC yako kuchengetedza shanduko.
Mushure mekuvandudza madhiraivha eGrafiki iwe unogona kugona Gadzirisa NVIDIA Control Panel Kwete Kuvhura nyaya.
1.Dzvanya Windows Key + R wobva wonyora services.msc ndokurova Enter.
2.Zvino tsvaga NVIDIA Ratidza Mutyairi Service wobva wadzvanya kurudyi kwariri uye sarudza Zvivakwa.
3. Ita chokwadi Startup mhando yakagadzirirwa kuAutomatic uye tinya Kutanga kana sevhisi isati yatomhanya.
4.Dzvanya Nyorera zvichiteverwa neOK.
5.Reboot PC yako kuchengetedza shanduko.
1.Right-tinya pane yako NVIDIA graphic kadhi pasi peye maneja maneja uye sarudza Uninstall.
2.Kana wabvunza yekusimbiswa sarudza Hongu.
3.Dzvanya Windows Key + X wobva wasarudza Kudzora Panel.
4.Kubva paPaneru Panel tinya Uninstall chirongwa.
5.Next, uninstall zvese zvine chekuita naNvidia.
6.Reboot system yako kuchengetedza shanduko uye zvakare tora kurongedza kubva pawebsite yemugadziri.
imwe kana anopfuura windows ekuvandudza zvinhu zvakagadzirwa zvisizvo
5. Kana uchinge wave nechokwadi chekuti wabvisa zvese, edza kumisikidza madhiraivha zvekare . Iyo setup inofanira kushanda pasina matambudziko.
Kana pasina chinobatsira kusvikira zvino unogona kushandisa Ratidza Mutyairi Uninstaller kubvisa zvizere madhiraivha akajeka. Ita shuwa ku bhuti mu Safe Mode wobva wabvisa vatyairi. Wobva watangazve PC yako uye kumisikidza yazvino madhiraivhiza eNVIDIA kubva kune webhusaiti yemugadziri.
Kana iwe usina yazvino NET Sisitimu uye VC ++ Inogovaniswa ipapo inogona kukonzera dambudziko neNVIDIA control panel nekuti inomhanya kunyorera paNET Sisitimu uye VC ++ Inogovaniswa.
Dhawunorodha ichangoburwa .NET Sisitimu
Dhawunorodha ichangoburwa VC ++ Inogovaniswa
1.Right-tinya pane Desktop munzvimbo isina chinhu uye sarudza Ratidza marongero.
2.Iva nechokwadi chekuseta iyo Kugadziriswa kune yepamusoro-soro kukosha , zvaizoratidzwa se zvakurudzirwa.
3.Dzorera PC yako kuti uchengetedze shanduko uye uone kana uchikwanisa Gadzirisa NVIDIA Control Panel Kwete Kuvhura nyaya.
1.Dzvanya Windows Key + R wobva wonyora regedit uye rova ​​Enter kuti uvhure Registry Edhita.
2. Enda kune inotevera rejista kiyi:
3.Wedzera ContextMenuHandlers uye uwane NvCplDesktopContext , wobva wadzvanya kurudyi kwariri uye sarudza Delete.
4.Zvino tarisa inotevera nzvimbo:
HKEY_CLASSES_ROOT Directory Background shell
5.Right-tinya Shell wobva wasarudza Nyowani> Kiyi uye wotumidza kiyi iyi se Nvidia Kudzora Panel.
6.Next, tinya-kurudyi Nvidia Kudzora Panel wobva wasarudza Nyowani> Kiyi ndokutumidza kiyi iyi se Raira.
7.Zvino sarudza Raira dhairekitori uye kurudyi-kuruoko hwindo tinya kaviri pairi Default kukosha uye woisa kukosha kwayo C: Windows System32 nvcplui.exe wobva wadzvanya OK.
8.Reboot PC yako kuchengetedza shanduko uyezve edza kuvhura NVIDIA control panel.
Ndikwo iwe wakabudirira Rongedza Nvidia control panel kwete kuvhura nyaya asi kana uchiri nemibvunzo ine chekuita nenyaya iyi unzwe wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
iTunes haione iphone windows 10
windows 10 kugadzirisa zana dhisiki rekushandisa
windows 10 iyi app iri kudzivirira kudzima
keyboard typing tsamba panzvimbo yenhamba
mahedhifoni haashande windows 10